Momba anay | Weifang Sofiq Machinery Co., Ltd.
Fanoloran-tena sy fiaraha-miasa, mianatra tsy tapaka. Ny mpiasa rehetra dia amin'ny anaran'ny orinasa.
Manome ny tsipika famolavolana sarobidy indrindra sy vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa, mahazo ny fitokisana sy ny fanajana avy amin'ny mpiara-miasa sy ny fiaraha-monina.
Mamorona lanja ho an'ny mpanjifa. Fanavaozana, fiaraha-miasa amin'ny ekipa, mikiry amin'ny fanaovana ny marina sy ny tsy fivadihana. Mitondrà tena tsara.
Miresaka tsara amin'ny asanay izahay, mitazona kalitao avo lenta ary famokarana tsy miova. nividy milina cnc mandroso sy fitaovana fanaraha-maso izahay mba hiantohana ny vokatra avo lenta, amin'ny alalàn'ny fandinihana mafy sy fanofanana tsy tapaka hanatsarana ny kalitaon'ny mpiasa matihanina.
Ny talenta no singa fototra amin'ny fampandrosoana orinasa, ny fifaninanana eo amin'ny orinasa dia ny fifaninanana talenta amin'ny famakafakana farany. Ny milina Sofiq dia nitazona hatrany ny foto-kevitra momba ny torolàlana momba ny olombelona sy ny teknika, amin'ny alàlan'ny fampidirana sy fanofanana talenta hananganana ekipa mafy orina miaraka amin'ny fifaninanana ifotony.
Famolavolana koveta fanariana, Sandbox, Milina Punch Out, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Masinina bobongolo, Famolavolana tavoahangy,